Wondershare Business Relations
Easy & rayn video editor leh filtarrada hodan iyo kala guurka.
Your dhamaystiran video qalabeed: download, diinta, edit, gubi iyo in ka badan.
Si fudud Abuur, Edit, Beddelaan, Calaamad, OCR PDF files. Sida aad la PDF shaqeeyaan beddel.
1-dii iPhone iyo iPad kabashada xogta software adduunka ayaa.
Software kabashada xogta 1aad adduunka ayaa u telefoonada Android iyo kiniiniyada.
Ceshano aad lumay files / tirtiray ka PC / Mac iyo qalabka lagu kaydiyo oo ay ka mid adag drive, kaadhka xusuusta, flash drive iwm
Transfer, Download, Record, Abaabulaan, Maamul, Guba, Baro iyo raaxo Music jecel aan Lugood.
Play Android Games ee Computer la Screen Big iyo Mouse & isku keyboard. Qaadan Just buuxda gacanta!
Si joogto ah masixi aad android & iPhone iyo ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Hal-stop xal kuu oggolaanaysa in aad maamulato nololeed mobile ah oo hal meel ku haboon.
The fudud Phone 1-Click in software Transfer Phone.
Eeg oo dhan
WARBAAHINTA & PR CONTACT
Ganacsade & Daabacaadda
Wondershare Soo dhaweeyay daabacayaasha si ay u daabacaan iyo iibiso waxyaabaha aannu iyada oo aan la dhigaayo iyo horumarinta software gooni ahaantood. Dhab ahaan baan u guul leh wada shaqeyn la leh daabacayaasha dalal badan iyagoo daabacayaasha daawooyin tayo sare leh, Customization buuxa, taageero xirfadeed iyo xataa iyadoo la abuurayo waxyaabaha cusub ee suuqyada maxalliga ah.
Wondershare Barnaamijka reseller awood u resellers si loo faa'iidada sare by iibinta alaabta Wondershare la isticmaalayo channels marketing iyaga u gaar ah ee suuqyada maxalliga ah.
Waxaan aad u danaynaya qaybinta naga software dhex resellers diiradda saaray dal gaar ah ama gobol. Maxaa yeelay, waxaan u malaynayaa in suuqa kasta oo ganacsi kasta baahan tahay in hab shakhsi ah, waxaan go'aansaday in ay beddelaan wadahadal shaqsi halkii yeynan hoos waqti xadidan. Muga Iibka iyo ballan si kor loogu qaado Wondershare ayaa ah waxyaalaha muhiimka ah ee go'aaminta iskaashi.
Wondershare Bixisaa kala duwan fursado la-hawlgalayaasha qaybinta si loo daboolo baahida suuqa gaarka ah ee macmiil kasta.
Wondershare Ayaa aad u xirfad iyo khibrad kooxaha soo koraya iyo waxyaabaha yihiin ee ugu fiican in ka badan suuqa adduunka ugu tayada.
Publishers iibin karaan waxyaabaha aannu sidoo kale aannu brand ama magac u gaar ah. Waxaan si buuxda u astaysto waxyaabaha noo per codsiyada daabacayaasha si ay u daabacaan alaabta iyo horumarinta waxyaabaha cusub ee la sawiro cusub, luqado cusub oo xitaa shaqooyinka cusub.
Ascaarta jumlada ah Low
Wondershare Bixisaa ascaarta jumlada ah mid tartan ku xiran tahay tirada jumlada iyo suuqa.
Lacagta laysanka tartan rasmi ah
Wondershare Bixisaa lacagta laysanka mid tartan u daabacayaasha our. Lacagta laysanka ayaa waxaa ka wada xaajoon doona oo ku heshiiyay ku xiran tahay tirada iyo suuqa.
La wadaag guusheena sii kordhaya ee warshadaha
Ururda wadashaqayn OEM waa iibiya hardware / software ama bixiyeyaasha adeegga farsamo qaraabo in Cudarada teknoolajiyada Wondershare la soo saarka si ay u dar qiimaha alaabta iyo suuqa ballaariyo.
Soo-saareyaasha of hardware alaabta (sida kamaradaha digital, Qalabka telefoonada gacanta, kombiyuutarka desktop, servers iyo wixii la mid ah) waxay ku siin karaan macaamiisha ay xal wanaajiyey oo la kordhiyo xadad ay ay midayso Wondershare teknoolajiyada iyo bixinta xidhmada isku daro.
Iibiya software Independent si fudud u dhexgalaan karo wax soo saarka Wondershare galay xilal ay wax soo saarka ee hadda jira. Barnaamijku wuxuu kor loo abuuraa wax soo saarka ah qiimaha sare, guud ahaan fursadaha dakhli dheeraad ah oo la taaban karo oo hoos u khatar ah tartamayaasha.
Hawlgalayaasha Service bixiyaha
Wondershare Bixisaa kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha ay u oggolaadaan PHPs, jilbiska iyo kuwa bixiya adeegyada u suurtagashay in ay caawiyaan iyaga u hesho macaamiisha u badan tahay inuu adeeg online.
Maxaad wadaag OEM ah Wondershare?
Kooxdayada xirfad OEM taageero lamaanahaaga siinayaa ah latalin iyo adeegyada si guul leh u dhexgalaan teknoolajiyada si loo hubiyo in qancinta macaamiisha.
Waxa xooga gebi on baahida macaamiisha ganacsiga. Wondershare Ayaa helay kalsoonida 35 milyan oo dadka isticmaala ganacsiga dalalka over150.
Wondershare Ayaa helay abaalmarino kala duwan ee wax soo saarka qaab aad u fiican, adeegyada heer-hore iyo isagoo gebi ahaanba adware-free, taas oo faa'ido weyn in ka badan nala tartamaya.
Abuuri aad dakhliga barnaamijka affiliate Wondershare!
Welcome to Wondershare Barnaamijka Affiliate! Biir barnaamij haatan si ay u sameeyaan $3.000 halkii todobaad! Barnaamijkayagu bixisaa hab kharash-ool ah milkiilayaasha website si ay dakhli dheeraad ah oo aan kharash kasta! Nolosha affiliate Wondershare ah waa wax fudud oo macaan! Halkee kale oo aad ka heli doontaa ugu yaraan 10 alaabta software iibinta sare in gebi ahaanba isu suuq iyo kasban guddiyada warshadaha keentay?
Sidee baan u saxiixo?
Dhab ahaantii aad u badan fursadaha ilaa saxiixi waayo, annagu waa laga heli karaa dhowr shabakadaha sare affiliate. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ay doortaan madal affiliate ku haboon, foomka buuxin markaas waxaad ka heli kartaa wax walba bilaabay.
Available Affiliate Network:
Guddiga kulankooda ShareASale LinkShare Linkconnector Mycommerce
Me Saxiix Up!
Maxaan sameeyaa haddii aan ahay affiliate horeba?
Waxaad dooran kartaa shabakad aad affiliate hoos ku riixi kartaa "Tag" hana ka raadin "Wondershare" in madal, oo aad codsato in si degdeg ah loo ansixiyey lahaa tababaraha naga affiliate.
Guddiga kulankooda LinkShare ShareASale LinkConnector Mycommerce
Sidee si aad u bilowdo oo aan waayo-aragnimo wax?
Ha welwelin ku saabsan, waxaan helay badan oo creatives kuwaasoo ka caawin kara in aad si fudud u dhalin iibka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u awoodaan in ay nuqul oo paste code HTML iyo meel sax ah gudahood ku code of bogga internetka ah. Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeri ah, fadlan hadda nala soo xiriir .
Waa maxay noocyada creatives uusan Wondershare bixiyo?
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo badan oo nooc ad in ay yihiin oo dhan IAB (Internet Advertising Bureau) waafaqsaneyn. Noocyada link waxaa ka mid ah calammo (ee kala duwan ee tirada), links qoraalka, iyo noocyada kale link sare. Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeri ah, fadlan hadda nala soo xiriir .
Sidee ayaan ku heli aan warbixin iibka?
Just saxiixa in network affiliate ah, hubi guddi ay gacanta ku, ka heli "Warbixin", waxaad ka heli kartaa waqtiga dhabta ah dakhliga lagu kalsoonaan karo & sax ah raad & warbixinta ay bixiyaan shabakadaha dunida caan ka affiliate. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay bixisaa si buuxda kalsoonida iyo isku halaynta. 100% damaanad ammaanka.
Sidee in ay curiyaan iibka dheeraad ah?
Waxaan leenahay badan oo kayd cajiib ah si uu kaaga caawiyo horumarinta, kaas oo aad doonaa halkan bartaan haddii aad si joogta ah u soo laabtaan, ama waxa kale oo aad qori karto si aad noo warsidaha qorshe bil kasta si ay u helaan more. Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeri ah, fadlan hadda nala soo xiriir .
Sidee baan lacag?
Dhab ahaantii waxa ay ku xiran tahay shabakadaha affiliate ah. Sida shabakadaha affiliate waa kala duwan, waxaad heli doonaa fursado kala duwan oo ay sabab u tahay shabakadaha kala duwan, ee ka dooro mid ugu haboon! Waxaan ka helaa isagoo xor ah.
Sidee baan ku heli lacagta?
Waxaad dooran kartaa si aad u hesho lacagta aad via jeeg boostada ama, haddii aad tahay degane ee Mareykanka ama Kanada, iyada oo dibaajiga tooska in xisaab bangi oo loo qoondeeyey. Waxaa jira adeeggan lacag la'aan. Deposit Direct waa la heli karaa oo kaliya ee US, UK, Germany, France, Sweden iyo Canada.
In ka yar USD $ 1999 30%
USD $ 2000 USD $ 3999 35%
USD $ 4000 si USD $ 5999 40%
USD $ 6000 si USD $ 7999 45%
USD $ 8000 ama ka badan 50%
Waxeey qabsadaan fursad aad marna ha laga yaabaa inuu tago maanta!
Wixii su'aalo dheeraad ah, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriir: affiliate # wondershare.com (bedeli # la @)
Our Affiliate Policy | Si loo hubiyo in labada xuquuqda & faa'iidooyinka iyo keenaba, fadlan guji inay ogaadaan siyaasadda affiliate Wondershare.
Dhamaan su'aalaha iyo faallooyinka waa la soo dhawaynayaa
Daraasado Thest jira sheekooyin run, bandhigaya qaar ka mid ah dhaqanka xiriirka ganacsi Wondershare ee shirkadaha aasaasay oo heer caalami ah.
In ka badan 3 sano, Wondershare Co., Ltd wuxuu dhisay xiriir saaxiibtinimo iskaashi muddo dheer la KiBAN International Co., Ltd. Wondershare Ayaa sameeyay taxanaha qalabka qoraalka courseware xirfad u yari ka nidaamka maamulka Learning KiBAN International ee, taas oo keenta in E-barashada xal dhamaystiran. E-barashada Suite waxaa lagu fulinta baahida dadka isticmaala Japan ka macalimiinta in ay tababarayaasha shirkad, barbaro wacyiga ee shirkado badan oo caan ah sida Ricoh oo ugu danbeyn noqday macaamiisheena daacad.
Sida labada dhinac ay ka go'an in e-learning anshaxa, waxaan qiimaynaa muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta maamulka waxqabadka in muddo horumarinta wax soo saarka, had iyo jeer isagoo sarrifka shaqaalaha si loo horumariyo xasiloonida, waafaqsanaanta iyo awood of software E-barashada.
Everton iyo alaabta casriyaynta la taaban karo u dambeeyey iyo kordhinta goobta waxbarasho mobile ciidamo Suite software mobile si gaar ah loogu talagalay, iskaashiga ka dhexeeya Wondershare iyo KiBAN International cadeeyo guul iyo hayn doonaa ka shaqeeya bixinta software class-sare si ay macaamiisha Japan.
TRG, gaaban for "Group Khayraadka", ayaa hoggaamisa oo ka shaqeeya dhowr xarumood oo ku yaalla wac toddoba dal. Macaamiisha TRG Solutions (oo horay Telespectrum) waxay bixisaa tilifoonka, daryeelka macaamiisha, iyo adeegyo taageero farsamo si ay "maal" 500 shirkadood ee warshadaha adeegyada dhaqaale, caymiska, dawooyinka, isgaarsiinta, iyo utility, iyo kuwo kale.
Ka dib markii TRG go'aansadeen in ay qiimeeyaan QuizCreator, isaga oo kaalmo ku Hanuuniyaa, TRG dhigay ilaa QuizCreator oo si guul leh daabacay qiimaynta imtixaanka ujeedada, ka dibna ay diiradda saaray awood warbixinta of Management System Kediska, adeeg natiijada qiimeynta raadraaca iyo warbixinta ka. Oo intaasu waxay ahayd shuruudaha ugu muhiimsan in ay qarka u saaran qalab qiimayn sababta oo ah waxay u baahan yahay si ay ula socdaan dhammaan natiijooyinka qiimaynta dhammaan ardaydu si fudud oo waxtar leh.
Saddex bilood ka dib iibka ah ee QuizCreator iyo Management System Kediska, waxaa jiray 2461 tababaray in la buuxiyo qiimeynta. 26 qiimaynta on TRG Compliance Standards Test ayaa la soo saaray oo la daabacay on Management System Kediska si guul leh loo baaro internetka. Waxay hoos waqtiga loogu talagalay horumarinta kooras iyo bixinta micnaheedu halka badbaadiyey fund badan oo ku saabsan tababarka.
Kumanaan ka mid ah dadka isticmaala oolna ah dad faro badan oo ganacsi tababarka, dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, ganacsi la taliye, shirkadaha IT, dawladaha iyo wixii la mid ah u isticmaalaya Wondershare QuizCreator sidii xal qiimaynta tayada online bixinta tababarka iyo horumarinta shaqada ama ku-oolnimada baran qiimaha Dhanka kale hoos iyo yaraynta muddada tababarka . Oo waxaannu ku faraxsanahay inuu magacaabo shirkad adduunka-yaqaan iyaga ka mid ah halkan lagu wadaago waayo-aragnimo.
Haddii aad rabto in aad hesho ganacsi xal caadadii shirkadda aad la Wondershare QuizCreator iyo Management System Kediska ah, fadlan nala soo xiriir.